Isiphelo esothusayo sikaSwitzerland Whistleblower kwi-COVID-19 kunye nentsholongwane entsha
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeMpilo » Isiphelo esothusayo sikaSwitzerland Whistleblower kwi-COVID-19 kunye nentsholongwane entsha
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • Safety • Iindaba zaseSwitzerland eziQhekezayo • Technology • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
48 imiz efundwayo
Kwiintsuku ezimbini zokuqala, inqaku nguPUmqolo. UGqr med. UHC Paul Robert Vogt waseSwitzerland Ufunde ngaphezulu kwama-350,000 amaxesha kwaye wabelana ngamawaka aliwaka. UNjingalwazi Vogt yingcali ye-Cardiac kunye ne-thoracic Vascular Surgery kwaye ubonakalisa ukungaphumeleli ekujongeni intsholongwane. Uya kuthatha indawo yokungazi kunye nokuzikhukhumeza ngamanqaku kweli nqaku. Inqaku laguqulelwa ngesiJamani nguGqirha Peter Tarlow, Ingcali yezoKhuseleko noKhuseleko kwi-eTN www.wfwasecity.com . UGqr Tarlow uthi: Mna yalungisa uguqulelo lukaGoogle ngesiNgesi ukuze iqondakale ngakumbi kumfundi othetha isiNgesi. Iingcinga zezakhe; izilungiso zotoliko zezam
UNjingalwazi Vogt: Kutheni ndithatha indawo?
1. Kudala ndisebenza Intliziyo ye-EurAsia -ISwitzerland Medical Foundation kwi I-EurAsia ngaphezulu kweminyaka engama-20, ndisebenze e-China phantse unyaka kwaye bendinonxibelelwano oluqhubekayo kwiSibhedlele soManyano saseTongji Medical College / iYunivesithi yaseHuazhong iminyaka engama-20 yeSayensi neThekhinoloji eWuhan, apho ndinenye yezi ndwendwe zine iinjingalwazi e China. Ndikwazile ukugcina unxibelelwano lweminyaka engama-20 ukuya eWuhan rhoqo kumaxesha akhoyo.
Covid-19 ayisiyongxaki yokungenisa umoya kuphela; ichaphazela intliziyo ngendlela efanayo. Ezinye iipesenti ezingama-30 zazo zonke izigulana ezingaphiliyo kwiyunithi yonyango olunzulu zifa ngenxa yezizathu zentliziyo.
Unyango lokugqibela lokungaphumeleli kwemiphunga luchaphazela isifo sentliziyo okanye sokuhlinzwa: ukusetyenziswa kwe «ECMO», indlela ye «extracorporeal membrane oxygenation», okt ukudibana kwesigulana nomphunga wangaphandle, owenziweyo osetyenziswa kule nto umfanekiso weklinikhi ungawuthatha umsebenzi wemiphunga yesigulana ide isebenze kwakhona.
Zombini inqanaba lokusasazwa kweendaba kunye nenani elikhulu lamagqabaza abafundi akufuneki ukuba zamkelwe ngaphandle kokuphikisana ngokweqiniso, isimilo, ubuhlanga kunye ne-eugenics. Sifuna ngokungxamisekileyo inkcaso esekwe kwidatha ethembekileyo nakulwazi.
Iinyani ezithiwe thaca zivela kumaphepha enzululwazi aphononongwe kwaye ziye zapapashwa kwezona jenali zonyango zibalaseleyo. Uninzi lwezi nyani lwalusaziwa ukuphela kukaFebruwari. Ukuba wena (ubethetha nomsebenzi wezonyango waseSwitzerland) uziqwalasele ezi nyaniso zonyango kwaye ubukwazile ukwahlula umbono, ezopolitiko kunye nezamayeza, iSwitzerland ngekhe ibe kwindawo engcono namhlanje: ngekhe sibe neyesibini kwi-COVID-19- abantu abanethemba kwihlabathi liphela nangomntu omncinci kakhulu inani elincinci labantu abaphulukene nobomi babo kwimeko yesi sifo. Ukongeza, kusenokwenzeka ukuba besingayi kuba nengxaki engaphelelanga, engaphelelanga kuqoqosho lwethu kwaye kungekho ngxoxo iphikisanayo malunga "nokuphuma kwethu apha".
Ndingathanda ukuqaphela ukuba yonke imisebenzi yesayensi endiyikhankanyileyo iyafumaneka kum ngendlela yabo yoqobo.
1. Amanani akumajelo eendaba
Kuyaqondakala ukuba wonke umntu ufuna ukuqonda ubungakanani balo bhubhane ngandlela thile. Nangona kunjalo, izibalo zemihla ngemihla azisincedi, kuba asazi ukuba bangaphi abantu abaye banxibelelana nentsholongwane ngaphandle kweziphumo kwaye bangaphi abantu abagulileyo.
Inani leempawu ze-COVID-19 ze-asymptomatic zibalulekile ukuze kwenziwe uqikelelo malunga nokusasazeka kwesifo. Ukufumana idatha enokusebenziseka, nangona kunjalo, umntu bekuya kufuneka enze uvavanyo lobunzima ekuqaleni kobhubhane. Namhlanje umntu unokuqikelela ukuba bangaphi abantu baseSwitzerland abanxibelelana ne-COVID-19. Iphepha elinombhali waseMelika-waseTshayina osele epapashiwe nge-Matshi 16, 2020 (amanqaku) ukuba kumatyala ali-14 abhaliweyo, angama-86 ayengamatyala angenawo amaphepha abantu abane-COVID-19. ESwitzerland, umntu kufuneka alindele ukuba i-15x ukuya kuma-20x abantu abaninzi banesifo se-COVID-19 kunokuba kubonisiwe kubalo lwemihla ngemihla. Ukuvavanya ubungqongqo bhubhane, siya kufuna enye idatha:
Inkcazo echanekileyo, esemhlabeni jikelele yokufumanisa isifo "unesifo se-COVID-19":
a) uvavanyo oluqinisekileyo lweelebhu + iimpawu;
b) uvavanyo oluqinisekileyo lweelebhu + iimpawu ezihambelana nomphunga i-CTc) uvavanyo oluqinisekileyo lwelebhu, akukho zimpawu, kodwa iziphumo ezihambelanayo kwimiphunga ye-lung.
2) inani lezigulana ezibhedlele ze-COVID-19 kwizigulana ngokubanzi (zezibhedlele)
3) inani lezigulana ze-COVID-19 kwicandelo lezonyango
I-4) inani lezigulana ezingena moya ze-COVID-19
5) inani lezigulana ze-COVID-19 kwi-ECMO
6) inani le-COVID-19 ongasekhoyo
7) inani loogqirha nabongikazi abosulelekileyo
Ngala manani kuphela anika umfanekiso wobuzaza balo bhubhane, okanye ubungozi bentsholongwane. Ukuqokelelwa kwamanani okwangoku kungachanekanga kwaye kunokuchukumiseka "kukhuphiswano lokuziva" -into yokugqibela esiyifunayo kule meko.
2. “Umkhuhlane oqhelekileyo”
Ngaba lo “ngumkhuhlane oqhelekileyo” odlula minyaka le kwaye asihlali senza nto ngawo - okanye ubhubhane oyingozi ofuna amanyathelo angqingqwa?
Ukuphendula lo mbuzo, awunyanzelekanga ukuba ubuze ababalo abangazange basibone isigulana. Uvavanyo olusulungekileyo, lweenkcukacha manani lwalo bhubhane alunasimilo. Kuya kufuneka ubuze abantu abaphambili.
Akukho namnye koogxa bam - ewe nakanye - kwaye akukho namnye kubasebenzi abongikazi okhumbula ukuba le miba ilandelayo igqithile kwiminyaka engama-30 okanye engama-40 edlulileyo, eyile:
iikliniki zizele zizigulana ezinezifo ezifanayo;
iiyunithi zonyango olupheleleyo zizaliswe zizigulana ezinezifo ezifanayo.
abanye abangama-25% ukuya kuma-30% abongikazi neengcali zonyango nabo bafumana esi sifo kanye kunabo banezigulana ezibanyamekelayo;
zimbalwa kakhulu izixhobo zokuphefumla ezazifumaneka;
ukhetho lwesigulana kuye kwafuneka lwenziwe, hayi ngenxa yezizathu zonyango, kodwa ngenxa yokuba inani elininzi lezigulana liswele izinto ezifanelekileyo;
abaguli abagula kakhulu bonke babenemifanekiso efanayo - efanayo;
indlela yokufa yabo bonke abo basweleke kwigumbi labagula kakhulu iyafana;
Amayeza kunye nezinto zonyango zisongela ukuphela.
Ngokusekwe koku kungasentla kuyacaca ukuba yintsholongwane eyingozi ebangela lo bhubhane.
Ibango elithi "umkhuhlane" liyingozi ngokulinganayo kwaye lixabisa inani elifanayo lamaxhoba minyaka le alilunganga. Ukongeza, ibango lokuba umntu akazi ukuba ngubani oswelekayo kwaye ngubani ofayo ngenxa ye-COVID-19 nalo liphelile.
Makhe sithelekise umkhuhlane kunye ne-COVID19: Ngaba unoluvo lokuba ngomkhuhlane zonke izigulana zihlala zisweleka "ngenxa" yomkhuhlane kwaye azikaze "zino"? Ngaba singabagqirha kwezonyango kwimeko yobhubhane we-COVID-19 ngequbuliso sisidenge kangangokuba asisakwazi ukwahlula ukuba umntu usweleke “kunye” okanye “ngenxa” ye-COVID-19 ukuba ezi zigulana zineklinikhi eqhelekileyo, iziphumo zophando lwaselebhu kunye oqhelekileyo? Ngaba unayo i-lung CT? Ewe, xa kufikwa ekufumaniseni "umkhuhlane", ewe, wonke umntu wayehlala ephaphile kwaye ehlala ezama ukufumanisa isifo kwaye wayehlala eqinisekile: hayi, ngomkhuhlane, wonke umntu uyafa "ngenxa ye" kwaye kuphela nge-COVID-19 ezininzi "Ngo".
Ukongeza: ukuba bekukho abantu abayi-1,600 ababulawa ngumkhuhlane eSwitzerland ngonyaka omnye, sithetha malunga nokufa kwabantu abayi-1,600 ngaphezulu kweenyanga ezili-12 - ngaphandle kwamanyathelo othintelo. Nge-COVID-19, nangona kunjalo, babekhona, ngaphandle kwekhawuntari enkulu, amanyathelo angama-600 okusweleka kwinyanga enye (1)! Amanyathelo okumelana nawo anokukunciphisa ukusasazeka kwe-COVID-19 nge-90 %- ke unokucinga ukuba yeyiphi imeko enokubakho ngaphandle kwemilinganiselo.
Ukongeza: kwinyanga enye> Izigulana ezingama-2200 zalaliswa esibhedlele ngenxa ye-COVID-19 eSwitzerland kwaza kwafika kwizigulana ezingama-500 ezibhedlele kwiiyunithi ezahlukeneyo zononophelo ngaxeshanye. Akukho namnye kuthi owakhe wazibona iimeko ezinjalo kumxholo we «influenza».
Malunga ne-8% yabanonopheli bakwafumana umkhuhlane njengenxalenye yomkhuhlane "oqhelekileyo", kodwa akukho mntu ubhubha kuwo. Kwi-COVID-19, iipesenti ezingama-25 ukuya kuma-30% zabanonopheli bosulelekile kwaye oko kunxulunyaniswa nokufa okubalulekileyo. Uninzi loogqirha nabongikazi abaye bakhathalela abaguli be-COVID-19 babulewe sisifo esifanayo.
Kwakhona: jonga iinombolo ezinzima kwi "influenza»! Awuyi kufumana nayiphi na. Oko uza kufumana kukuqikelela: i-approx. I-1000 okanye i-1600 eSwitzerland; bamalunga nama-8000 eItali; malunga. I-20,000 48,000 eJamani. Isifundo se-FDA (Ulawulo lwe-US lokutya kunye noLawulo lweeDrug) sivavanye ukuba zingaphi ezingama-10,000 zomkhuhlane obhubhileyo ngonyaka omnye e-United States ngokwenene zisweleke kwi-classic influenza pneumonia. Isiphumo: yonke imifanekiso yeklinikhi enokwenzeka yafakwa phantsi "kokubulawa yinyumoniya", umzekelo inyumoniya yosana olusandul 'ukuzalwa olunama-amniotic fluid afunelwa emiphungeni ngexesha lokuzalwa. Kolu hlalutyo, inani (lezigulana) "ezibulewe sisifo somkhuhlane" lehle kakhulu laphantsi kwe-XNUMX.
ESwitzerland, asilazi elona nani labaguli ababulawa ngumkhuhlane unyaka nonyaka. Kwaye oku (inyani ngu) ngaphandle kweenkqubo zokufumana idatha ezixabisa kakhulu; ngaphandle kokungeniswa kwedatha okuphindwe kabini nokuphindwe kathathu ziiklinikhi, iinkampani zeinshurensi yezempilo kunye nabalawuli bezempilo; ngaphandle kwenkqubo ye-DRG engenangqondo kunye nexabiso eliphezulu evelisa kuphela ububhanxa. Asinakho nokubonelela ngenani elichanekileyo lezigulana zomkhuhlane esibhedlele ngenyanga! Kodwa inkcitho yezigidi kunye neebhiliyoni (zeSwitzerland Francs) kwiiprojekthi ze-IT ezixabise kakhulu nezingahambelaniyo.
Ngokusekwe kwimeko yolwazi ngoku, umntu akanakuthetha "ngomkhuhlane oqhelekileyo". Kungenxa yoko le nto ubhubhane ongathintelwanga eluntwini ingeyondlela (Ndiyakholelwa ukuba uthi; ukuvalelwa okuncinci). Iresiphi, ewe, ukuba i-Great Britain, iNetherlands neSweden bazama bayincama enye emva kwenye.
Ngenxa yenqanaba langoku, ulwazi olungonelanga, amanani kaMatshi nawo awatsho kwanto. Sinokuphuma kancinci okanye sifumane intlekele. Amanyathelo aqinileyo athetha ukuba igophe labagulayo lithe tyaba. Kodwa ayisiyiyo nje kuphela ukuphakama kwegophe, ikwangommandla ophantsi kwegophe kwaye oku ekugqibeleni kubonisa inani lokufa.
3. «Kusweleka abaguli abadala nabagulayo kuphela»
Ipesenti-isifo sesibini-isimilo kunye ne-EUGENIK
Iminyaka yabo bafa eSwitzerland iphakathi kweminyaka engama-32 ukuya kweli-100. Kukho ezinye izifundo kunye neengxelo ezibonisa ukuba abantwana babulawa yi-COVID-19.
Nokuba yi-0.9% okanye i-1.2% okanye i-2.3% iswelekile yi-COVID-19 isekondari kwaye kukutya nje kwezibalo. Inani elipheleleyo lokufa okubangelwe ngulo bhubhane kufanelekile. Ngaba ukufa kwe-5000 kubi kakhulu xa bemele i-0.9% yazo zonke izinto ezithwala i-COVID-19? Okanye ngaba i-5,000 ifile kakhulu ukuba imele i-2.3% yazo zonke izithuthi ze-COVID-19?
Umyinge weminyaka yezigulana ezingasekhoyo kuthiwa yi-83, uninzi - uninzi kakhulu kuluntu lwethu- mhlawumbi luchitha njengolungabalulekanga.
Oku "kupha ngesisa" xa abanye besweleka akunakujongwa kwindawo yethu. Ndiyayazi enye into, ukukhwaza kwangoko kunye nesohlwayo kwangoko xa sibetha umntu okanye umntu osondeleyo kum.
Ubudala buhlobene. Omnye umgqatswa wobuMongameli wase-US uneminyaka engama-73 namhlanje kwaye omnye unama-77. Ukufikelela kubudala obuphakamileyo, bokuzimisela kunye nomgangatho wobomi obulungileyo yimpahla exabisekileyo esityala imali kuyo kukhathalelo lwempilo eSwitzerland. Kwaye sisiphumo samayeza ukuba ungaphila ukwaluphala kunye nokuchongwa kwamacala amathathu kunye nomgangatho wobomi. Ezi mpumelelo zilungileyo kuluntu lwethu ngesiquphe azisaxabisi nto, kodwa ngaphezulu, ngumthwalo nje?
Ukongeza: ukuba i-1000 ngaphezulu kweminyaka engama-65 ubudala okanye i-1000 ngaphezulu kweminyaka engama-75 ubudala ebekade becinga ukuba basempilweni bayavavanywa, emva kokutshekishwa ngokucokisekileyo> iipesenti ezingama-80 ezintsha ze-3 "zokuxilongwa kwesekondari", ngakumbi xa kufikwa kwizifo "Uxinzelelo lwegazi oluphezulu" okanye "iswekile".
Amanqaku athile eendaba kunye nezimvo zabafundi-zininzi kakhulu, ngokoluvo lwam-zinqumla yonke imida kule ngxoxo, zinevumba elibi lee-eugenics kunye nezikhumbuzo zamaxesha aqhelekileyo avelayo. Ngaba kunyanzelekile ukuba ndibize loo minyaka? Ndiyamangaliswa kukuba amajelo eendaba ethu engakhange enze mzamo wokubhala ngokucacileyo malunga nalo mbandela. Ngamajelo ethu apapasha ezi zimvo zibuhlungu kwiikholamu zabo zokuphawula kwaye bazishiye apho. Kwaye kuyamangalisa ukuba abezopolitiko bangakuboni kufanelekile ukunika uluvo olucacileyo malunga noku.
Kwabhengezwa lo bhubhani
Ngaba iSwitzerland yayikulungele kancinci ukubulawa sesi sifo?
Ngaba kukho naziphi na izilumkiso ezithathiweyo xa kwaqhambuka i-COVID-19 e-China? Hayi
Ngaba uyazi ukuba ubhubhane we-COVID-19 uya kusasazeka kwihlabathi liphela?
EWE, KWABhengezwa kunye NOMHLA WEDATHA NGOMATSHI 2019.
I-SARS ibingenile 2003 .
IMERS ibingenile 2012 .
kwi 2013: I-Bundestag yaseJamani ixoxe ngemeko zentlekele: IJamani izilungiselela njani iintlekele, ezinje ngezikhukula? Kule meko, kwaxoxwa nangendlela iJamani ekufuneka isabele ngayo kubhubhane we-SARS wexesha elizayo! Ewe, ngo-2013 iBundestag yaseJamani yalinganisa ubhubhane weSARS corona eYurophu naseJamani!
In 2015: inzame yentsebenziswano yokulinga yapapashwa ngabaphandi abavela kwiiyunivesithi ezintathu zase-US, uWuhan kunye nomphandi wase-Itali wase-Varese, onelebhu e-Bellinzona. Ezi zinto zivelise iintsholongwane ze-corona elabhoratri kwaye ke ngoko zosulela iinkcubeko zeseli kunye neempuku. Isizathu somsebenzi: bafuna ukuvelisa isitofu sokugonya okanye isibulala-manqam somzimba ukuze zilungiselelwe ubhubhane wecorona olandelayo.
Ekupheleni 2014urhulumente wase-US ulurhoxisile uphando nge-MERS kunye ne-SARS unyaka omnye ngenxa yengozi ebantwini.
kwi 2015: U-Bill Gates wenza intetho ethathelwa ingqalelo ngokubanzi kwaye wathi umhlaba awulungelanga ubhubhane we-corona olandelayo.
kwi 2016: kwavela elinye iphepha lophando elalijongana neentsholongwane zekorona. Isishwankathelo sale mpapasho kufuneka sinyibilike emlonyeni wakho kuba yinkcazo efanelekileyo yento eyenzekayo ngoku:
“Ukujolisa kwii-SARs ezifana ne-SARS, le ndlela ibonisa ukuba iintsholongwane ezisebenzisa iprotein ye-spiv ye-WIV1-CoV ziyakwazi ukosulela iinkcubeko ze-alveolar endothelium ngokuthe ngqo ngaphandle kokuphindaphinda. Kwidatha ye-vivo bonisa ukuthothisa xa kuthelekiswa ne-SARS-CoV, ukuphindaphindeka okwandisiweyo phambi kwe-angiotensin yomntu eguqula uhlobo lwe-enzyme 2 kwi-vivo iphakamisa ukuba intsholongwane inokubakho kokubangela intsholongwane engafakwanga ziimodeli zezilwanyana ezincinci zangoku. ”
NgoMatshi 2019: uphononongo lwezifo olwenziwe ngu-Peng Zhou wase-Wuhan uthe, ngenxa yebhayoloji yeentsholongwane ze-corona kumalulwane ("bat") e-China, kunokuqikelelwa ukuba kungekudala kuya kubakho esinye isifo se-corona. Kunjalo! Awunakutsho ngqo ukuba nini kwaye phi, kodwa i-China iya kuba yindawo eshushu.
Ngokomthetho-siseko, bekukho i-8 IKHCRETE, IZILUMKISO EZICACILEYO KWI-17 YONYAKA ukuba into enje iza kuza. YAYE KE NGOKUQINISEKILEYO IYA KUFIKA! NgoDisemba 2019, iinyanga ezili-9 emva kwesilumkiso sikaPeng Zhou. Kwaye amaTshayina azisa i-WHO emva kokubona izigulana ezingama-27 ezine-pneumonia ye-atypical ngaphandle kokufa. Ikhonkco lokuphendula laseTaiwan, elinamanyathelo ayi-124, liqala nge-31 kaDisemba-zonke zipapashwe ngoMatshi 3, 2020. Kwaye hayi, khange ipapashwe ngesiTaiwan-isiTshayina kwiphephancwadi lezonyango laseAsia, kodwa ngentsebenziswano IYunivesithi yaseCalifornia kwi "Ijenali yeAmerican Medical Association".
Ekuphela kwento ekufuneka uyenzile: ukusukela nge-31 kaDisemba ngo-2019, ngena kwi "bat + coronavirus" kwi "PubMed", kwiLayibrari yeSizwe yezeMithi yaseMelika, kwaye yonke idatha yayifumaneka. Kwaye konke okufuneka ukwenze kukulandela upapasho kude kube sekupheleni kukaFebruwari 2020 ukuze wazi: 1) ukuba ulindele ntoni kunye no-2) ukuba wenze ntoni.
I-Uzbekistan iyalele abafundi bayo abangama-82 baseWuhan ukuba babuye ngo-Disemba kwaye babafaka bodwa. Ngo-Matshi 10, ndalumkisa iSwitzerland isuka e-Uzbekistan kuba ndandiceliwe uluvo lwam: amalungu epalamente, iBundesrat, i-BAG, neendaba.
Kwaye yenze ntoni iSwitzerland okoko i-China yazisa i-WHO ngo-Disemba 31, 2019? (Yintoni) oorhulumente bethu, i-BAG yethu, iingcali zethu, ikhomishini yethu yobhubhane (eyenziwe)? Kubonakala ngathi abakhange babone nto. Ewe imeko ithambile. Ngaba ufanele uxelele abantu? Yenza uvalo? Uqhubeka njani? Yintoni ebinokwenziwa ubuncinci: funda umsebenzi wobunzululwazi ogqwesileyo wezenzululwazi zaseTshayina naseMelika naseTshayina ezithe zapapashwa kwezona jenali zibalaseleyo zonyango zaseMelika naseNgesi.
Ubuncinci- kwaye inokwenzeka ngaphandle kokwazisa abemi, ngaphandle kokuhlwayela uvalo- ubuncinci umntu wayenokugcwalisa izinto eziyimfuneko zonyango. Ukuba iSwitzerland, nenkqubo yayo yezempilo engama-85 ezigidi zezigidi zeerandi, apho usapho olukumgangatho ophakathi oluphakathi kwabane alusenako ukuhlawula iziqendu zeinshurensi yezempilo, luseludongeni emva kweentsuku ezili-14 zomoya omoya ophantsi, iimaski zimbalwa kakhulu, isibulala-zintsholongwane esincinci kwaye izixhobo zonyango ezincinci kakhulu lihlazo. Yenze ntoni ikhomishini yobhubhane? Ukuba ayifuni iPUK. Kodwa akukho namnye onomdla kwezopolitiko zethu.
Kwaye ukusilela ngokusemthethweni kuye kwaqhubeka unanamhla. Akukho manyathelo asetyenziswe ngempumelelo yiSingapore, iTaiwan, iHong Kong okanye iChina asetyenzisiweyo. Akukho kuvalwa komda, akukho lawulo lwemida, wonke umntu wayenokungena ngokulula eSwitzerland ngaphandle kokutshekishwa konke konke (ndikufundile oku ngoMatshi 15).
Ngama-Austrian awuvale umda neSwitzerland kwaye yayingurhulumente wase-Italiya owathi ekugqibeleni wamisa i-SBB ukuphela kuka-Matshi njalo njalo njalo njalo. Kwaye akukabikho ukuvalelwa kwabantu abangena eSwitzerland.
Ngaba iqela lophando lika-Antonio Lanzavecchia kwadityanwa nalo eBellinzona? UAntonio Lanzavecchia, ngubani obhalise uphando malunga nee-coronaviruses zokwenziwa ezichazwe apha ngasentla? Ingenzeka njani into yokuba uMnumzana Lanzavecchia nge-20 kaMatshi kwisikhululo esincinci seTicino TV athi le ntsholongwane iyosulela kakhulu kwaye iyanyangeka kakhulu-ke i-BAG nge-22 kaMatshi, kwiintsuku ezi-2 kamva, ibhala “ngesilivere”.
Ingenzeka njani into yokuba ubumbano oludibeneyo lwaseMelika nolwaseTshayina lupapashe kwiNzululwazi ngoMatshi 6 ukuba kuphela ukuvalwa komda okudityanisiweyo kunye nexesha lokubekwa ekhaya elisebenzayo, kodwa ke kungathintela ukusasazeka kwentsholongwane ngama-90% - i-FOPH kunye neBhunga likaRhulumente kodwa bathi ukuvalwa komda akuncedi nganto, "kuba uninzi lwabantu lwalunokosulelwa emakhaya kunjalo".
Ukunxiba imaski kwafunyanwa kungafuneki- hayi kuba ukusebenza kwayo bekungangqiniswanga. Hayi, kuba ngekhe ubonelele ngeemaski ezaneleyo. Kuya kufuneka uhleke ukuba bekungekho buhlungu kangako: endaweni yokuba uvume ukushiyeka kwakho kwaye uzilungise kwangoko, kungcono ubizelwe i-ambassador yaseJamani. Kwathiwa kuye: I-85 yezigidigidi (i-euro) yaseSwitzerland Inkqubo yezempilo ayinazo iimaski zokukhusela abemi bayo, abongikazi kunye noogqirha?
Uthotho lokophuka okulihlazo lunokwandiswa: ukubulala iintsholongwane ngesandla! Iyacetyiswa kuba iyasebenza kwaye iyacetyiswa sele ngexesha lomkhuhlane waseSpain. Sakhe seva ngabathathi-zigqibo ukuba zeziphi izibulala-ntsholongwane ezisebenzayo kwaye ezingezizo? Asizange, nangona isishwankathelo samaphepha angama-22 sapapashwa kwiJenali yeSifo seSibhedlele ngoFebruwari 6, 2020, eyayixela ngelo xesha ukuba iintsholongwane ze-corona zingaphila ukuya kwiintsuku ezili-9 ngesinyithi, iplastiki kunye neglasi, kwaye ziphi iintsholongwane ezintathu ezibulala iintsholongwane. intsholongwane ngaphakathi komzuzu omnye (1) kwaye zeziphi ezingazenziyo. Ewe, isibulali-ntsholongwane esifanelekileyo asinakucetyiswa ngokuthe ngqo: ummi ebeya kuqaphela ukuba akukho kwaneleyo kwaphela, kuba ivenkile yobhubhane, eyayifanele ukuba ine-ethanol (iipesenti ezingama-62 ukuya kuma-71% ze-ethanol zibulala iintsholongwane ze-corona ngaphakathi umzuzu omnye), wavalwa ngo-2018.
Zithe zakubonakala kwi-BAG ubunzima besi sifo, kwabhengezwa ukuba izigulana ekufuneka ziye kwigumbi labagula kakhulu ziya kuba namathuba amabi. Oku kuyaphikisana ngokucacileyo namaphepha enzululwazi apapashwe ngaphambili ama-4, avumayo onke ukuba i-38% ukuya kwi-95% yazo zonke izigulana ekufuneka ziye kwigumbi labagula kakhulu zingagoduswa.
Andifuni ukukhankanya amanye amanqaku apha. Izinto ezimbini zicacile: ubhubhane lubhengezwe ubuncinci ama-8 ukusukela ngo-2003. Kwaye emva kokuqhambuka kwabo kuxeliwe kwi-WHO ngoDisemba 31, 2019, ngeba neenyanga ezimbini zokufunda idatha elungileyo kwaye benze izigqibo ezifanelekileyo. Umzekelo, iTaiwan, emanyathelo ayo ali-124 apapashwe kwangethuba, inelona nani lincinci labantu abosulelekileyo nabaswelekileyo kwaye kunganyanzelekanga ukuba "livale" uqoqosho.
Amanyathelo amazwe aseAsia ahlelwa njengongenakwenzeka kuthi (eSwitzerland) ngezizathu zopolitiko nezisasazekayo. Enye yazo: ukulandelelwa kwabantu abosulelekileyo. Kucingelwa (akunakwenzeka) kwaye kuluntu olunokuthi ngokulula ludlulise idatha yalo yabucala kwii-iCloud's kunye ne-Facebook. Ukulandela? Ukuba ndiyehla kwinqwelomoya eTashkent, eBeijing okanye eYangon, kuthatha imizuzwana eli-10 kwaye iSwitzerlandcom indamkela kweli lizwe. Ukulandela? Akukho nathi.
Ukuba umntu ebeqhelaniswe ngcono, ebeya kubona ukuba amazwe athile angenza ngaphandle kwamanyathelo angqongqo. ESwitzerland, amanyathelo athathwe ngokungqongqo okanye hayi kwaphela, kodwa eneneni abahlali mabasulelwe. Amanyathelo angqongqo ngakumbi athathwe kade. Ukuba ubusabele, bekungafuneki ukuba (Switzerland) uthathe amanyathelo - kwaye ungazisindisa kwiingxoxo zangoku malunga "nokuphuma". Andifuni ukuthetha ngeziphumo zoqoqosho.
5. Imiba yezopolitiko - ipropaganda
Kutheni le nto iSwitzerland ingajonganga eAsia? Kwakukho ixesha elaneleyo. Okanye ngamanye amagama: ujonga njani iSwitzerland eAsia? Impendulo icacile: ikratshi, ukungazi kunye nokwazi konke. Ngokuqhelekileyo iYurophu, okanye ngaba ndimele ndixelele iSwitzerland?
UXi Jinping wayeselungile xa wayesithi ngenxa “ye-narcissism” yayo iYurophu yakhawuleza yaba liziko lobhubhane kwihlabathi. Ndingadibanisa: ngenxa yekratshi laseSwitzerland, ukungazi kunye nokungachazeki kukwazi konke.
Kwiikholamu zamagqabantshintshi, ngakumbi nangakumbi abafundi beendaba zethu baye baqaphela ukuba ukuba thina ngokwethu sinelona zinga liphezulu labantu abane-COVID-19 kunye nelinye lawona manqanaba aphezulu okusweleka komntu ngamnye oneSpain, sinokuyeka ukufundisa abanye rhoqo.
IYurophu ibonakala ingenakufundeka. I-America-ubuncinci izazinzulu zayo kunye nezinye zeentatheli zayo zopolitiko-zisabele ngokwahlukileyo. I-Melika iwamkele umsebenzi obalaseleyo wezenzululwazi wababhali baseTshayina kwaye bayipapasha kwiijenali zabo zonyango. Nakwi "Imicimbi yangaPhandle", elona jenali libalulekileyo kwezopolitiko zamazwe aphesheya, kukho imisebenzi enezihloko ezinje ngezi: "Yintoni enokufundwa lihlabathi eChina"; kwaye "I-China ine-app kwaye ilizwe liphela lifuna icebo"; Ngaphezu koko, ukuba "intsebenziswano yamazwe aphesheya phakathi kwezenzululwazi ngumzekelo" wendlela umntu ekufuneka "asebenze ngayo kunye nobuninzi bezinto ezininzi" kwezinye iindawo kunye nendlela umhlaba "odibene ngayo". Nditsho no-Anthony Fauci, u-Trump oyintloko we-virology,
Inyaniso yokuba ubunkokheli bezopolitiko e-US abuzange buphumeze oku ayisiyongxaki yoosonzululwazi, abathi, kubandakanya i-WHO, bancoma umsebenzi ogqwesileyo wamaTshayina emhlabeni: "amaTshayina ayayazi kakuhle into ayenzayo"; "Kwaye ngokwenene, balungile kuyo".
Ngokwahlukileyo, iphephancwadi laseJamani iDER SPIEGEL lapapasha inqaku elinesihloko esithi "Deadly arrogance" kwaye oko babengathethi iMelika, kodwa babenekratshi laseYurophu.
Emva kobhubhane we-SARS, i-China ifake inkqubo yokubeka iliso ekufuneka inike ingxelo ngokubonakala kwenyumoniya inyumoniya ngokukhawuleza. Xa izigulana ezi-4 zikweli lizwe zinabantu abaninzi ababonisa inyumoniya ngexesha nje elifutshane, inkqubo yokubeka iliso ibangele ialam.
Nge-31 kaDisemba, urhulumente wase-China wazisa i-WHO ukuba emva kwe-27 (eminye imithombo ithi: 41) abaguli base-Wuhan kwafunyaniswa ukuba bane-pneumonia ye-atypical kodwa babengekabhubhi.
NgoJanuwari 7, 2020, kwa eli qela linye e-Peng Zhou, elalilumkisa ngobhubhane we-corona ngo-Matshi 2019, lakhupha i-genome echazwe ngokupheleleyo yintsholongwane ebangela ukuba iikiti zovavanyo zikwazi ukuphuhliswa kwihlabathi liphela ngokukhawuleza, ziphanda ugonyo kunye ne-anti-monoclonal antibodies zinokuveliswa: ngokuchaseneyo nembono ye-WHO, amaTshayina akhubazekile uWuhan ngoJanuwari enesibhengezo sokuhamba kunye nexesha elibekiweyo.
Akufuneki ndiye kwamanye amanyathelo athathwe e-China. Ngokwamaqela ophando aphesheya, i-China ibusindisile ubomi bamakhulu amawaka ezigulana ezinala manyathelo okuqala nongqongqo.
Nge-31 kaDisemba ngo-2019, iTaiwan yamisa zonke iinqwelomoya ezisuka eWuhan. Amanye amanyathelo ayi-124 athathwe eTaiwan apapashwa kwiJenali yeAmerican Medical Association- ngexesha elifanelekileyo. Umntu bekufanele ukuba uziqaphele.
Ngaphandle kwamathandabuzo, umthetho wase-China kunye nolawulo lwayo ekuqaleni kukhokelele kuxinzelelo lolwazi olufanelekileyo, kodwa ngokuchaseneyo lusebenze ngempumelelo ngakumbi kamva ekunciphiseni ubhubhane. Ukujongana ne-ophthalmologist u-Li Wenliang kuyothusa, kodwa kuyahambelana neziganeko ezinjalo. Xa ngo-1918 ugqirha welizwe laseMelika u-Loring Miner e-Haskell County kwiphondo lase-Kansas e-US wabona izigulana ezininzi ezineempawu zomkhuhlane ezazigqitha ubukhali bazo zonke iimpawu zangaphambili, waguqukela kwi-United States yeNkonzo yezeMpilo kaRhulumente wacela inkxaso. Oku kwaliwa. Izigulana ezithathu zaseHaskell County zathunyelwa emkhosini. UAlbert Gitchell, i-NCO-isiguli i-NULL-isasaze intsholongwane kwinkampani ebipheka yona ibifuduselwa eYurophu. Malunga neentsuku ezingama-40 kamva bekukho izigidi ezingama-20 ezosulelekileyo kunye nama-20,000 1918 aswelekileyo eYurophu. Ubhubhane wango-XNUMX wabulala abantu abangakumbi kuneMfazwe Yehlabathi yokuqala.
Izikhalazo zaseNtshona malunga "nonyango" luka-Li Wenliang zichanekile, kodwa ziyavuza ngemigangatho ephindwe kabini, kuba umntu uyayazi into abaxhamla kuyo abaxelwayo eNtshona ngamaxabiso abo aphezulu. Urhulumente wase-United States uphinde wazama ukuhluza ulwazi lwezonyango ngokuyalela i-virologists ekhokelayo yaseMelika kuTrump ukuba baxoxe ngazo naziphi na iingxelo zikawonke-wonke kunye noMike Pence, usekela-mongameli, opapashwe kwi "Sayensi" epapashwe kutshanje phantsi kwesihloko esithi "Senzele inceba" ichazwe njenge "ayamkelekanga" kwaye ithelekiswa ne China.
Ezopolitiko yinto enye; umsebenzi wenzululwazi yenye into. Ukuphela kukaFebruwari 2020, kwavela amaphepha enzululwazi amaninzi kunye nababhali baseTshayina kunye nabaseTshayina ababedibene ukuba umntu wayenokwazi ukuba ubhubhani ungantoni kwaye kufuneka kwenziwe ntoni.
Kutheni waphoswa yiyo yonke into?
(Siyakhumbula) kuba abezopolitiko, okanye abeendaba okanye uninzi lwabemi abakwazi ukwahlula umbono, ezopolitiko kunye namayeza kwimeko enjalo. legciwane inyumoniya yingxaki yezonyango hayi ingxaki yezopolitiko. Ngombulelo kwezopolitiko nakwezobuchwephesha obuthethelelayo ukungahoyi iinyani zonyango, iYurophu yakhawuleza yazenza iziko lobhubhane kwihlabathi liphela-kanye embindini weSwitzerland ngenqanaba lesibini losulelo lomntu ngamnye.
Ezopolitiko kunye namajelo eendaba adlala indima ekhethekileyo apha. Endaweni yokugxila ekusileleni kwabo, abantu baphazanyiswa kukuqhubeka, ubuyatha base China. Ukongeza, njengesiqhelo, iRussia ibetha kunye neTrump bashing. Awunyanzelekanga ukuba uyithande iTrump konke-kodwa kude kube i-US ikwipalati neSwitzerland ngokwe-COVID 19 yokufa komntu ngamnye, (akukho namnye e-US omele abethe uTrump).
ISwitzerland ingahlala iwagxeka njani amanye amazwe ukuba unoyena mntu wesibini osulelekileyo ngomntu ngamnye ngenkqubo yesibini yezempilo ebiza kakhulu kwaye awunazo iimaski ezaneleyo, izibulala-ntsholongwane ezaneleyo okanye izixhobo ezoneleyo zonyango? ISwitzerland ayothuswanga ngulo bhubhane-emva komhla wama-31 kuDisemba 2019, bekukho ubuncinci iinyanga ezi-2 zokuthatha amanyathelo okhuseleko afuneka ngokungxamisekileyo. Kwaye amajelo eendaba abe negalelo ngokwaneleyo kule ndlela yokuziphatha. Ukusasazwa kweendaba kuphelile kwiintetho ezintle, ezibangelwa yiBhunga likaRhulumente kunye ne-BAG kunye nokugxeka amanye amazwe.
Kukho imizekelo eyaneleyo yokubhanxwa kweTshayina: "AmaTshayina anetyala"! Nabani na obanga into enje akaqondi nto ngebhayoloji kunye nobomi ngokubanzi. "Zonke iindyikitya zokufa zivela e-China": umkhuhlane waseSpain ngokwenene wawungumkhuhlane waseMelika, i-HIV yavela e-Afrika, i-Ebola yavela e-Afrika, umkhuhlane weehagu usuka eMexico, ubhubhane wekholera kwii-1960s kunye nezigidi zabantu abaswelekileyo bevela eIndonesia naseMERS kuMbindi EMpuma ngeziko laseSaudi Arabia.
Ewe, i-SARS yeza ivela e-China. Kodwa amaTshayina, ngokungafaniyo nathi, afundile ukuba "iMicimbi yaNgaphandle" yabhala njani nge-27 ka-Matshi 2020: "Ubhubhane wexesha elidlulileyo wabhengeza ubuthathaka base China. Le yaNgoku ibalaselisa amandla ayo ”.
Ukuba kusoloko kubangwa ukuba amanani apapashwe yiTshayina kubhubhane we-COVID 19 onke afihliwe, kuthetha ntoni oko? Ngaba oko kuthetha ukuba akukho mfuneko yakwenza nto ngako? Okanye ngaba oko akuthethi ngaphezulu kakhulu - ukuba la manani acwebezelwe ngaphezulu - ukuba sisibetho esiyingozi ngakumbi esinokuthi senze amalungiselelo eYurophu? Kukhulu kakhulu kwingcinga yokungabinangqondo, incoko yezopolitiko!
Ngeengxelo ezithe rhoqo ezifana "AmaTshayina axoka nje". "I-Taiwan awukholelwa kwanto"; "ISingapore, ubuzwilakhe bosapho, uxoka njalo", umntu akanakumelana nalo bhubhane. Apha, futhi, iphephancwadi laseMelika elithi "Imicimbi yangaPhandle" - ngokuqinisekileyo ayilungelanga i-China nganye-isebenza ngobukrelekrele, njengoko unokufunda nge-Matshi 24, 2020: "I-US kunye ne-China banokubambisana ukuze boyise ubhubhane. Endaweni yoko, Ukuchasana kwabo kwenza izinto zibe mbi ngakumbi ”. Kwaye nge-21 kaMatshi: "Kuthatha Ihlabathi Ukuphelisa Ubhubhane. Intsebenziswano yeSayensi ayiyazi mida - Ngethamsanqa ”.
Ndingamkela kuphela ukugxekwa kukaLukas Bärfuss. Ngokukodwa ingxelo yakhe:
«Kutheni iifektri ezifanelekileyo azisekho kwiBiberist. Kodwa eWuhan. Kwaye nokuba le ngxaki yolwabiwo ayinakuchaphazela i-cellulose kuphela, kodwa nolwazi, imfundo, ukutya kunye namayeza ».
Le ngxelo ibetha amanqaku kwaye ibhence ukuzikhukhumalisa nokungazi kwethu.
Akwanelanga ukuba ekuqaleni kwesi sifo, iNtshona ibijonge ukuqaqamba kwaye inomdla othile e-China? Ngaba inkxaso yase China yamazwe aseNtshona ngoku kufuneka ingcoliswe kakubi? Ukuza kuthi ga ngoku, i-China ibonelele ngeemaski ezi-3.86 zezigidigidi, iisuti ezikhuselayo ezizizigidi ezingama-38, izixhobo zokulinganisa ubushushu be-infrared kunye ne-2.4 yokuphefumla. Ayililo ibango le-China kwigunya lehlabathi, kodwa ukusilela kwamazwe aseNtshona kukhokelele ekubeni iNtshona ixhonywe kwi-drip yase China.
6. Ivelaphi le ntsholongwane?
Zimalunga nama-6400 izilwanyana ezanyisayo emhlabeni wethu. Amalulwane kunye neziqhwala zeziqhamo zenza i-20% yabemi bezilwanyana ezanyisayo. Zili-1000 iindidi zamalulwane neziqhwala ezilwayo. Zizo kuphela izilwanyana ezanyisayo ezinokubhabha, ezichaza uluhlu lwazo olukhulu lokuhamba.
Amalulwane kunye namalulwane eziqhamo akhaya kwizinkulungwane ezininzi zeentsholongwane. Amalulwane kunye namalulwane eziqhamo kwimbali yophuhliso mhlawumbi ibe yindawo yokungena kwiintsholongwane kumlibo wezilwanyana ezanyisayo.
Zininzi iintsholongwane eziyingozi ezisasazeke ebantwini zaya "kumalulwane" kwaye zinoxanduva lwezifo ezininzi: imasisi, uqwilikana, umgada, iMarburg fever, i-Ebola kunye nezinye, izifo ezinqabileyo. (Ndiyazibuza ukuba ingaba le ngxelo kufuneka ibe ngamalulwane ebantwini na?) Kwezinye izilwanyana ezincancisayo, iintsholongwane ezivela kwi "Bats" ziye zakhokelela ekufeni kwabantu abaninzi kwihagu, kwinkukhu okanye ekuzaleni iintaka.
Ezi ziinkqubo zebhayoloji ezinezigidi zeminyaka ubudala. I-DNA yabantu abasempilweni ikwaqulathe iintsalela zokulandelelana kwemfuza kwintsholongwane esele "yakhiwe ngaphakathi" ngaphezulu kwewaka leminyaka.
I-SARS kunye ne-MERS baqinise uphando kwiintsholongwane ze-corona, ngokuchanekileyo ngenxa yokuba ubhubhane we-corona virus okanye ubhubhane kulindeleke kungekudala. Ezinye ezingama-22 kwezingama-38 ezaziwayo nezingaqinisekanga ukuba ziintsholongwane zecorona ziye zafundwa banzi ngabaphandi baseTshayina, yabona, phakathi kwezinye izinto, upapasho lukaPeng Zhou kwisifo se- "bat coronaviruses in China" kunye nolunye upapasho lwababhali baseMelika abakhankanywe ngasentla. U-Peng Zhou uxele kwangaphambili ubhubhane omtsha we-corona ngo-Matshi 2019 ngezi zizathu zilandelayo:
iintlobo ngeentlobo zezinto eziphilayo eTshayina;
inani eliphezulu "lamalulwane" e-China;
uxinano lwabemi e China = ukuhlala kunye phakathi kwezilwanyana nabantu;
ukwahluka okuphezulu kwemfuza "kwamalulwane", okt kunokwenzeka kakhulu ukuba i-genome yohlobo oluthile lwe-coronavirus inokutshintsha ngokuzenzekelayo ngenxa yokutshintsha okungahleliwe;
ukuphindaphinda okuphezulu kokusebenza kwemfuza kwiintsholongwane ze-corona kuthetha ukuba: Iintsholongwane zeCorona zeentlobo ezahlukeneyo zitshintshisana ngokulandelelana kwe-genome enye kwenye, ezinokuthi emva koko zibenze babe ndlongondlongo ebantwini;
Inyaniso yokuba uninzi lwezi ntsholongwane- ii-corona virus, kodwa ne-Ebola okanye i-Marburg virus-zihlala kunye kwezi «malulwane» kwaye ngengozi zinokutshintshiselana ngezinto zofuzo
Nangona kungangqiniswanga, uPeng Zhou ukwathethe neendlela zokutya zaseTshayina, ezonyusa ukubakho kwezi ntsholongwane zidluliselwa kwizilwanyana ziye ebantwini. UPeng Zhou walumkisa ngobhubhane wecorona kwinqaku lakhe lika-Matshi 2019. Wabhala ke ukuba akangekhe achaze ukuba uzokuvela nini kwaye phi lo bhubhani, kodwa i-China inokuba yindawo “eshushu”. Ininzi kakhulu inkululeko yesayensi! U-Peng Zhou kunye neqela lakhe lase-Wuhan baqhubeka nophando, kwaye ngabo abachonga i-genome ye-COVID-19 ngoJanuwari 7 kwaye babelana ngayo nehlabathi.
Kukho iingcamango ezi-4 malunga nendlela le ntsholongwane isasazeka ngayo kubantu:
1) Intsholongwane ye-COVID-19 idluliselwe kwilulwane iye ngqo ebantwini. Nangona kunjalo, intsholongwane ebuzwayo kwaye ihambelana nemfuza i-96% yentsholongwane "ye-COVID-19" yangoku ayinakho, ngenxa yesakhiwo sayo, idokhi eya kwi "angiotensin eguqula i-enzyme" (ACE) uhlobo lwe-2 emiphungeni. Nangona kunjalo, intsholongwane iyayifuna le enzyme ukuze ikwazi ukungena kwiiseli zemiphunga (nakwiiseli zentliziyo, izintso namathumbu) kwaye iyitshabalalise.
I-2) Intsholongwane ye-COVID-19 yatsiba ebantwini isuka kwipangolin, isilwanyana esanyisayo saseMalaysia esasingeniswe ngokungekho mthethweni e-China, kwaye ekuqaleni sasinga bangeli zifo. I-3) Njengenxalenye yokuhanjiswa koluntu ngokulandelelana, le ntsholongwane iye yaqhelana neemeko zomntu ngokubanzi ngenxa yenguquko okanye ukuziqhelanisa kwaye ekugqibeleni yakwazi ukumisa i-receptor ye-ACE2 kwaye ingene kwiiseli, "eziqale" ubhubhane.
I-4) Kukho ubunzima bomzali kwezi zintsholongwane ze-COVID-19, ngelishwa kude kube ngoku azibonakalwanga.
Yintsholongwane yelebhu eyenziweyo, kuba yile nto kanye ibiphandiwe kwaye indlela yebhayoloji yokuvuselela umdla sele ichaziwe ngokweenkcukacha ngo-2016. Iintsholongwane ezichaphazelekayo ziyalile le nto, kunjalo, kodwa azinakuyikhetha, nayo, ukuba ijonge phezulu kupapasho olusandula kupapashwa "lwezeNdalo Amayeza": "Imvelaphi eyintloko ye-SARS-CoV-2" nguKristian Andersen.
Eyona nto ikhethekileyo ngezi nyani kukuba intsholongwane ye-corona inokuhlala kunye ne-Ebola virus kwi-bat efanayo ngaphandle kokuba ilulwane ligule. Kwelinye icala, oku kunomdla ngokwenzululwazi kuba mhlawumbi iindlela zokuzivikela komzimba zinokufunyanwa ezichaza ukuba kutheni la malulwane engaguli. Ezi ndlela zokulwa amajoni omzimba ngokuchasene neentsholongwane ze-corona kunye nentsholongwane ye-Ebola inokubonelela ngolwazi olubalulekileyo kuHomo sapiens. Kwelinye icala, ezi nyaniso ziyakhathaza kuba umntu unokucinga ukuba ngenxa yokuphakama okuphezulu, okusebenzayo, kwemfuza, "i-supervirus" inokwenza, enexesha elide lokufukama kunentsholongwane ye-COVID-19 yangoku, kodwa ukubulala Intsholongwane ye-Ebola.
Abakwa-SARS babenokufa okuli-10%; Ukufa kwe-MERS kwakuyi-36%. Kwakungekho ngenxa ye-homo sapiens ukuba i-SARS kunye ne-MERS khange zisasazeke ngokukhawuleza njenge-COVID-19 ngoku. Kwakulithamsanqa nje. Ibango lokuba intsholongwane enezinga eliphezulu lokusweleka kwabantu ayinakusasazeka kuba ibibulala umamkeli wayo ngokukhawuleza kakhulu yayichanekile ngexesha apho ikharavani ye “camel” esosulelekileyo yayishiye i-X'ian isiya kwi-Silk Road nangenxa yokufa kwayo okuphezulu kwikharavani elandelayo ayisafiki. Namhlanje snap. Namhlanje wonke umntu uthungelwano olukhulu. Intsholongwane ebulala kwiintsuku ezi-3 isajikeleza ihlabathi. Wonke umntu uyazi iBeijing neShanghai. Ndazi uWuhan iminyaka engama-20. Akukho namnye koogxa bam okanye abantu endibaziyo abakhe beva ngoWuhan. Kodwa ubonile ukuba bangaphi abantu bamanye amazwe ababeseWuhan - kwisixeko "akukho mntu waziyo" - kwaye basasazwa njani kuyo yonke imimandla yehlabathi ngesantya sombane? Injalo ke imeko namhlanje.
7. Yintoni esiyaziyo? Into esingayaziyo
1) ukuba yintsholongwane enobundlobongela;
2) ukuba ixesha lokuxubusha lithetha iintsuku ezi-5; elona xesha liphezulu lokufukama alikacaci;
3) ukuba i-COVID-19 ye-asymptomatic carriers ingosulela abanye abantu kwaye le ntsholongwane "iyosulela kakhulu" kwaye "iyanyangeka kakhulu" (A. Lanzavecchia);
4) siyabazi abantu abasemngciphekweni;
5) ukuba kule minyaka ili-17 idlulileyo khange kwenzeke ukuba kwenziwe ugonyo okanye i-monoclonal antibody ngokuchasene ne-coronaviruses;
6) ukuba ugonyo kuyo nayiphi na intsholongwane ye-corona ayizange yenziwe;
7) ukuba oko kubizwa ngokuba "kukugonya umkhuhlane" kunesiphumo esincinci kuphela, ngokuchasene nentengiso edumileyo.
1) ingaba akukho mkhuseli na emva kokuba usulelekile. Idatha ethile ibonisa ukuba abantu banokuphuhlisa ii-immunoglobulins zodidi lwe-G ukusuka kusuku lwe-15, ekufuneka luthintele ukuphinda usuleleke kwintsholongwane enye. Kodwa okwangoku akukangqinwa;
2) kukukhusela ixesha elingakanani ukukhusela?
3) ingaba le ntsholongwane i-COVID-19 ihlala izinzile na, okanye ingaba i-COVID-19 eyahlukileyo iyasasazeka kwakhona kwihlabathi jikelele ekwindla, ifana nomoya oqhelekileyo womkhuhlane, ekungangeni kuwo ukhuseleko;
I-4) ingaba amaqondo obushushu aphezulu ehlotyeni aya kusinceda kuba isiseko se-COVID-19 asizinzanga kumaqondo aphezulu obushushu. Kufuneka kukhankanywe apha ukuba intsholongwane ye-MERS yasasazeka eMiddle East ukusukela ngoMeyi ukuya kuJulayi, xa amaqondo obushushu ayephezulu kunangaphambili.
Kuthatha ixesha elingakanani ukuba abemi bosuleleke kangangokuba ixabiso le-R <1:
Ukuba uvavanya abantu abayisigidi e-Zurich ngexesha elithile, i-1% ukuya kwi-12% ye-COVID-18 kuthiwa inethemba ngalo mzuzu. Ukuthintela ubhubhane wohlobo lwendyikitya yokufa, ixabiso le-R kufuneka libe ngu- <19, okt malunga nama-1% abemi kufuneka babe banonxibelelwano nale ntsholongwane kwaye babe nesifo. Akukho mntu waziyo ukuba kuya kuthatha ixesha elingakanani, zingaphi iinyanga de usulelo, ekufanele ukuba luli-66% ukuya kwi-12%, lufikelele kuma-18%! Kodwa kunokucingelwa ukuba ukusasazeka kwentsholongwane ukusuka kwi-66% ukuya kwi-12% ukuya kwi-18% yabemi kuya kuqhubeka ukuvelisa abaguli abagula kakhulu.
ke asazi ukuba sizakujongana nale ntsholongwane ixesha elingakanani. Iingxelo ezimbini, ekungafanelekanga ukuba zifikeleleke eluntwini (Isicwangciso Sokuphendula se-COVID kaRhulumente wase-US kunye nengxelo evela kwi-Imperial College yaseLondon) ziza ngokuzimela kwinqanaba "lokuvala" ukuya kuthi ga kwiinyanga ezili-18;
kwaye asazi ukuba le ntsholongwane izakuhlala kuthi ubhubhane / ubhubhane okanye mhlawumbi ide ibekho;
asikaqapheli kwaye sisebenza ngokubanzi, unyango oluchaziweyo; Asikaze sikwazi ukubonisa enye yezi kwimeko yomkhuhlane.
Mhlawumbi abasemagunyeni kunye namajelo eendaba kufuneka babeke iinyani etafileni endaweni yokuveza ingxelo ngogonyo olubonakalayo oluyimpumelelo olungekho kude qho kwiintsuku ezimbini.
Yintoni esinokuyenza ngoku?
Andikwazi ukuwuphendula umbuzo malunga nezona zisombululo zibalaseleyo. Kuyenzeka ukuba iSwitzerland iqulethe ubhubhane kwaphela okanye ingaba usulelo luyaqhubeka lungachaphazeleki kuba onke amanyathelo aqale agqithwa.
Ukuba kunjalo, umntu unokuba nethemba lokuba asizukuhlawula lo "mgaqo-nkqubo" unabantu abaninzi abaswelekileyo nabagula kakhulu. Kwaye azikho zininzi kakhulu izigulana ezihlupheka kwiziphumo zexesha elide zosulelo lwe-COVID-19, ezinje ngo "enkosi" kwi-COVID-19 esandula ukufunyanwa i-lung fibrosis, ukuphazamiseka kweswekile yeglucose kunye nezifo zentliziyo ezivelayo. Iziphumo zexesha elide zokufumana usulelo lwe-SARS zibhalwe ukuya kuthi ga kwiminyaka eyi-12 emva kokunyanga okutyholwayo. Masithembe ukuba i-COVID-19 iyakuziphatha ngokwahlukileyo.
Ukuphakanyiswa kwe "lock-down", okanye ukubuyela kwinto esiyibona njengesiqhelo, ngokuqinisekileyo yinto yomntu wonke. Akukho mntu unokuqikelela ukuba ngawaphi amanyathelo anokukhokelela kwiziphumo ezibi xa ubuyela esiqhelweni-Oko kukuthi, ukuba inqanaba losulelo liphinde lavela kwakhona. Lonke inyathelo elisezantsi linyathelo eliya kwinto engaziwayo.
Singathetha nje kuphela into engenakwenzeka: usulelo olusebenzayo lwamaqela angengomngcipheko kunye ne-virus ye-COVID-19 ngokuqinisekileyo yintsomi. Inokuza kuphela kubantu abangenalo nofifi malunga nebhayoloji, amayeza kunye nokuziphatha:
Ngokuqinisekileyo akukho kumcimbi wokosulela ngabom izigidi zabemi abasempilweni ngentsholongwane enobundlobongela esingazi nto kwaphela ngayo, nokuba bubungakanani bomonakalo omkhulu okanye iziphumo zexesha elide;
1) inani elikhulu leentsholongwane kubemi bonke, kokukhona liya kuba nethuba elikhulu lokutshintsha ngengozi, elinokuthi lenze ukuba intsholongwane ibe noburhalarhume ngakumbi. Ke ngokuqinisekileyo akufuneki sincedise ekunyuseni inani leentsholongwane kubemi bonke.
I-2) Okukhona abantu bosulelwa yi-COVID-19, kokukhona kunokwenzeka ukuba le ntsholongwane izakuziqhelanisa "ngcono" nabantu kwaye ibe yintlekele ngakumbi. Kucingelwa ukuba le nto sele yenzekile ngaphambili.
3) noRhulumente waseSwitzerland ogciniweyo ekuthiwa yi-US $ 750 yezigidigidi, kuyenzeka ngokuziphatha nangokuziphatha okuhle ukosulela izigidi zabantu abasempilweni ngenxa yoqwalaselo lwezoqoqosho nje.
Usulelo ngabom lwabantu abasempilweni abanale ntsholongwane enoburhalarhume luya kujongela phantsi omnye wemigaqo esisiseko kwimbali yonke yezonyango ngaphandle “kokukhathazeka” kwezoqoqosho okwethutyana, okwethutyana: umgaqo "we-primum nil nocere" (Inguqulelo: Okokuqala musa ukwenza ukwenzakalisa). Njengogqirha, ndingavumi ukuthatha inxaxheba kwiphulo lokugonya.
Ukuchongwa kwe-COVID-19 IgM kunye ne-IgG ye-anti-concentration egazini kubonakala kuhamba kunye nokungathathi hlangothi kwintsholongwane ye-COVID-19. Ukuchongwa kobungakanani kunye nobulunga bezi zintsholongwane kude kube ngoku kuphandwe kwisifundo esincinci sonyango kunye nezigulana ezingama-23. Okwangoku akunakwenzeka ukutsho ukuba ukumiselwa kobunzima be-antibodies egazini kuya kwenza ukuba "ukuvalela" kukhuseleke ngakumbi ngokuvumela kuphela abantu abosulelayo nabosulelayo ukuba bahambe ngokukhululekileyo. Akukacaci ukuba le ndlela iya kusebenza nini kwezonyango kwaye isebenze ngokubanzi.
9. Ixesha elizayo
Lo bhubhani uphakamisa imibuzo emininzi yezopolitiko. "Imicimbi yezangaphandle" noDonald Trump kunye no-Anthony Fauci kwiphepha elingaphandle babhala ngo-Matshi 28, 2020: "Izibetho Zisixelela Ukuba Singobani. Ezona Zifundo Zobhubhani Ziyakuba Zezopolitiko ”.
Le mibuzo yezopolitiko iya kuba yesizwe neyamazwe aphesheya.
Imibuzo yokuqala ngokuqinisekileyo iya kuchaphazela inkqubo yethu yokhathalelo lwempilo. Ngohlahlo-lwabiwo mali lwe-85 yezigidigidi, iSwitzerland- ngokwenani lezigulana ze-corona kwisigidi esinye sabantu-bayenza indawo yesibini kwihlabathi liphela. Ndiyakuvuyela! Lelona hlazo! Izinto ezisisiseko kunye nexabiso eliphantsi zilahlekile eSwitzerland emva kweentsuku ezili-1. Oko kuza xa abo bazibiza ngokuba "ngabapolitiki bezempilo", "oqoqosho lwempilo" kunye neengcali ze-IT zichitha iibhiliyoni kwiiprojekthi ezinje nge-e-health, amakhadi ezempilo e-elektroniki, iinkqubo zeenkcukacha zekliniki ezixabise kakhulu (cela isibhedlele saseLucerne Cantonal!), Iitoni zekhompyuter kunye " Idatha Enkulu. ” »Tyala imali kwaye ngaloo ndlela urhoxise amawaka ezigidi kwinkqubo yezempilo esetyenziswe gwenxa. Kwaye ubugqirha kunye ne-FMH basisiyatha ngokoqobo ukuba bangayimela. Bakhetha ukubizwa ngokuba ngabaphuli-mthetho kunye nabaphuli-mthetho veki nganye. ISwitzerland kufuneka ekugqibeleni iphande ukuba ingakanani imali eyi-14 yesigidi semali esasetyenziselwa iinkonzo zonyango, ezinceda isigulana ngokuthe ngqo kunye nokuba ingakanani imali esetyenziselwa ezinye iinjongo kunemibutho yokuphembelela engaphandle kolu shishino, engenazintloni yokuzityebisa kwikhekhe le-1 yezigidigidi ngaphandle kokubona isigulana. Kwaye, ewe, ulawulo olululo lomgangatho weenkonzo zonyango luyafuneka ekugqibeleni. Andifuni ukuya kwamanye amanyathelo njengenxalenye yokulungiswa kwakhona kwenkqubo yezempilo yaseSwitzerland apha. Kwaye, ewe, ulawulo olululo lomgangatho weenkonzo zonyango luyafuneka ekugqibeleni. Andifuni ukuya kwamanye amanyathelo njengenxalenye yokulungiswa kwakhona kwenkqubo yezempilo yaseSwitzerland apha. Kwaye, ewe, ulawulo olululo lomgangatho weenkonzo zonyango luyafuneka ekugqibeleni. Andifuni ukuya kwamanye amanyathelo njengenxalenye yokulungiswa kwakhona kwenkqubo yezempilo yaseSwitzerland apha.
Imibuzo yamazwe aphesheya ikakhulu ichaphazela ubudlelwane bethu ne China kunye namazwe aseAsia ngokubanzi. Amagqabantshintshi: ewe. Kodwa rhoqo, "ukubhuqa" kobubhanxa bezinye izizwe akunakuba yindlela yokuphelisa iingxaki zehlabathi kunye - andifuni nokuthetha "ngokusombulula". Endaweni yokuchaza ipropaganda engenangqondo, umntu kufanele ukuba ajongane nababhali abanento yokuthetha kwinqanaba eliphezulu, njenge:
Pankaj Mishra: "Ukusuka kumanxuwa obukhosi"
UKishore Mahbubani: “Ummangaliso wase-Asean. Owona Mthombo woxolo “
“Ngaba iNtshona ilahlekile?”
"Ngaba abantu baseAsia banokucinga?"
U-Lee Kuan Yew: "Imbono yomntu omnye ngehlabathi"
UDavid Engels: "Endleleni eya ebukumkanini"
UNoam Chomsky: "Ngubani olawula umhlaba"
UBruno Macàes: “Ukuza kwe-Eurasia”
UJoseph Stiglitz: “Usisityebi kwaye ulihlwempu”
UStephan Lessenich: "UNogumbe ecaleni kwethu"
IParag Khanna: "Ikamva lethu laseAsia"
Ukufunda akuthethi ukuba bonke aba babhali balungile kuyo yonke into. Kodwa iya kuba yexabiso elikhulu eNtshona- kubandakanya iSwitzerland- ukuba ithathe indawo yokwazi konke, ukungazi nokuzikhukhumeza apha naphaya ngezibakala, ukuqonda kunye nentsebenziswano. Olunye uhlobo kukuzama ukuphelisa abo sikhuphisana nabo kungekudala okanye kamva emfazweni. Wonke umntu angazenzela isigqibo sokuba makacinge ntoni ngesi “sisombululo”.
Ngale ndlela, umntu unokuba nethemba lokuba ubuntu buya kukhumbula ngcono. Ukuphupha kuhlala kuvunyelwe.
Imiceli mngeni yehlabathi liphela. Kwaye ubhubhane olandelayo ujikeleze ikona. Kwaye mhlawumbi oku kuya kubangelwa yintsholongwane ephezulu kwaye kuthathe ukuya kuthi ga endaweni yokuba singacingi.
Kwiintsuku ezimbini zokuqala, inqaku elo lalisele lifundwe ngaphezulu kwama-350,000 amaxesha kwaye kwabelwana ngalo ngamawaka aliwaka uNjingalwazi uGqr. Med. UGqirha HC Paul Robert Vogt